के तपाईलाई पत्थरी भएको छ ? अब यी ३ घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् १००% ठिक हुन्छ – Medianp
के तपाईलाई पत्थरी भएको छ ? अब यी ३ घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् १००% ठिक हुन्छ
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, मङि्सर १४, २०७५१३:३६0
काठमाडौ । के तपाईलाई पत्थरी भएको छ ? त्यसले के गर्ने होला भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ ,त्यसोभए अब चिन्ता नगर्नुहोस । अब हामी गर्नेछौ ,तपाईको समय र पैसा दुवैको सदुपयोग ,जसले गर्दा कही पनि धाएर तपाईले दुख पाउनु पदैन् । अब हाम्रै घरमा भएको घरेलु चिजहरुले निको हुन्छ ।
तर पत्थरी भएको कसरी थाहा पाउने त ?हेर्नुस यसका लक्षणहरु ,
-यसले बिरामी रातभरी सुत्न नसक्नुका साथै पिंडाले छटपटिन्छ । त्यसैले यो महिलाहरुमा भन्दा तीन गुणा बढी पुरुषमा पत्थरी हुन्छ।
-पत्थरी हुँदा बिरामीको पेटको तल्लो भागमा दुख्छ ।
-त्यसैगरी बारम्बार पिसाब आउने, पिसाब फेर्ने समयमा पींडा हुने, पिसाब रोकी रोकी आउने, कहिले कहीं जोडको पिसाब आउने, र अन्डाकोष दुख्ने जस्ता समस्याहरु यसको लक्षणहरु हुन् ।
अब हेरौ , यसका घरेलु उपचार पद्धतिहरु , जसले जुनसुकै र जस्तो सुकै पुरानो पत्थरीलाई पनि सजिलै निकाल्न मद्धत गर्दछ । जान्नुहोस्
-पहिलो उपाय हो , नियमित रुपमा ज्वानोको चिया पिउनले पत्थरी निर्मुल पार्न सकिन्छ । यसका लागी करिब एक गिलास पानीमा १० देखि १५ ग्राम ज्वानो राखेर १० १५ मिनेट सम्म उमाल्ने । उमालि सकेपछी पानीलाई मन तातो चिसो हुन दिनुहोस् । पानी चिसो भए पछी यसमा एउटा कागतीको रस मिसाएर पिउनुहोस् । पत्थरी निकाल्नको लागि यो एक लाभदायी चिया र उपाय पनि हो ।
-त्यसैगरी कागतीको रस र ओलिव ओइल पनि अर्को घरेलु उपाय हो । यसका लागी कागतीको रस ६० मिलिलिटर र ६० मिलिलिटर ओलिव ओइल मिसाउने । मिक्स गरिसकेपछि यसलाई पिउने । यसको लगातार सेवनले केहि दिनमै पत्थरीलाई हटाउँछ । कागतीको रस र ओलिव ओइल हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि निकै फाइदाजनक र लाभदायी सामग्री हुन् ।
-त्यसैगरी तेस्रो उपाय भनेको प्याज हो । यसमा पत्थरीलाई नाश गर्ने तत्व हुन्छ । यसका लागी एउटा प्याजलाई सानो सानो टुक्रामा काटेर पिस्ने । प्याज पिसेर पेस्ट बनिसकेपछी एक सुतीको कपडा अथवा छान्ने प्रयोग गरेर पेस्टबाट रस निकाल्ने । यो रसलाई बिहान खाली पेटमा पिउने। यसरी प्याजको रस नियमित रुपमा पिउनले पत्थरीलाई सानो सानो टुक्रामा निकाली केहि दिनमै पूर्ण रुपमा हटाउँछ ।
नेपाल एयरलाइन्सले ल्याएका दुवै वाइड बडी विमानमा अनियमितता देखियो , किनेको भन्दै झुक्याएर विमान भाडामा
माझी बस्तीमा खानेपानी अभाव
हरियो सागसब्जीको सेवनले लाग्न दिदैन्, यस्ता ६ ठुला रोगहरु !
डिप्रेसन, कब्जियत लगायत यी ८ स्वास्थ्य समस्याको लागी तिल ! यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
हात या अनुहार कालो भएर देखाउन लाज लाग्छ, पार्दिनेछ कागतिले एक छिनमै सफाचट
जानीराख्नुहोस् ! यी ब्लड ग्रुप हुने व्यक्तिलाई हुन्छ हर्ट अट्याकको खतरा